Site na nnyefe jet ọhụrụ 71, TAP Air Portugal na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ Chicago, San Francisco & Washington, DC
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Site na nnyefe jet ọhụrụ 71, TAP Air Portugal na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ Chicago, San Francisco & Washington, DC
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
TAP Air Portugal dị nnọọ gbakwunyere ụgbọ elu 100th na ụgbọ mmiri ya, Airbus A330neo, ka onye na-ebu ụgbọ na-akwado ịmalite ọrụ echi site na Chicago O'Hare, na emesịa ọnwa a site na San Francisco na Washington, DC. Nakwa na June 1, TAP ga-ewebata A321 LR na arụmọrụ US, na-efe efe n'etiti Newark na Porto.
Otu ụgbọ mmiri nke 100 bụ ndekọ maka ụgbọ elu 74 dị afọ. Na mkpokọta, TAP nwere ụgbọ elu ọhụrụ 71 anapụtara site na 2025, gụnyere 21 A330neos, 19 A320neos, 17 A321neos, na 14 A321 Long Range jets. TAP bụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu maka ụgbọ elu A330neo ma ugbu a bụ naanị ụgbọ elu ụgbọ elu ụwa iji rụọ ọrụ ụgbọelu NEO kachasị ọhụrụ nke Airbus.
Na June 1, TAP ga-ebu ụgbọ elu azụmahịa mbụ nke ụgbọ elu ya na Airbus A321 Long Range, na June 1, na-apụ na Porto maka Newark Liberty International. Nke a ga-abụ oge izizi ụgbọ elu ezinụlọ dị warara, nke na-arụkarị ụzọ dị n'etiti, na-eme ụzọ dị ogologo karị. Ihe ọhụrụ dị iche iche nke ụgbọ elu a na-enye ya ohere ifefe na Atlantic, na-enye ndị njem nkasi obi kachasị elu nke ụgbọ elu dị ogologo oge.
Nakwa na June 1, TAP na-amalite ụgbọ elu njem njem ise kwa izu n'etiti Chicago O'Hare na Lisbon. Ugboro ugboro ise na-eme njem gburugburu kwa izu n'etiti San Francisco na Lisbon na-amalite na June 10, wee gagharịa kwa izu ise n'etiti Washington-Dulles na Lisbon na June 16.
“Echi bụ, ọzọ, ụbọchị akụkọ. TAP bụ ọsụ ụzọ n'ofe Atlantic nwere otu ụdị ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke Airbus, nke kachasị arụ ọrụ nke ọma ma dị mma n'ụwa, "ka Antonoaldo Neves, Onye isi oche TAP kwuru. “Ikike iji rụọ ọrụ ụgbọ elu transatlantic bụ uru agbakwunyere nke Airbus A321LR, nke TAP nwere ike iji rụọ ọrụ ọnọdụ ala Portugal nke ukwuu, nyere nso nso nke ụsọ ọwụwa anyanwụ US na ugwu ọwụwa anyanwụ nke Brazil. Ọbịbịa na mgbanwe nke ụgbọ elu a na-enye anyị ohere ịbawanye njikọ dị n'etiti Porto-New York na Porto-São Paulo. "
Site na oche oche 16 zuru oke, nke ọkaibe, nke anọ n'ime ha bụ otu, Airbus A321LR na-enyekwa ohere karịa na klaasị akụ na ụba nwere oche ergonomic, nke kwekọrọ na nke dị na Airbus A330neo, yana ihe ntụrụndụ na sistemụ njikọ jikọtara na ozi ederede edere na-enweghị njedebe.
Ntughari ohuru nke ugbua nke ugbo elu, ya na ugbo elu ohuru iri asaa na asaa emere atụmatụ site na 71, bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ndị na - ekenye ndị ahịa ọhụrụ gosipụtara oge nke ụlọ ọrụ ụgbọelu na 2025. planesgbọ elu ndị a kachasị ọhụrụ, nwere ọtụtụ oche na ọnụ ala, obi nke mgbanwe TAP na imeziwanye ihe.
Ọganihu ụgbọ mmiri TAP, site na 2015 ruo 2018, na-anọchite anya mmụba 21% - nke kachasị n'ụgbọ elu Europe ọ bụla, nke toro site na nkezi 13% n'otu oge ahụ, dị ka Flight Global data si kwuo.
Gbọ elu 7-afọ iri bụ otu n'ime ụgbọ elu 10 kasị elu na-eto eto n'afọ a, dị ka ụzọ. TAP bụ ụgbọ elu European kachasị na-eto eto na United States n'ime afọ anọ gara aga, na-efe efe 39% karịa ndị njem, ma e jiri ya tụnyere asọmpi ndị ụgbọ elu Europe na-asọ mpi nke 19% n'otu oge ahụ.
Ugbo ohuru a putara uzo siri ike maka ntaneti maka TAP - dika oru ohuru na Lisbon si Chicago O'Hare, San Francisco na Washington-Dulles na onwa na abia. Ihe mgbakwunye ndị a pụtara TAP ga-arụ ụzọ ụzọ ụzọ 8 North America, okpukpu anọ nke afọ anọ gara aga. Ọganihu ndị njem TAP n'etiti Portugal na North America toro 176.5% n'etiti 2015 na 2018. Na Brazil, ebe ụgbọ elu na-enye ọtụtụ ọnụ ụzọ ámá Europe, TAP hụrụ mmụba 22.8% na ndị njem n'otu oge ahụ.
Flightsgbọ elu Chicago ga-arụ ọrụ na Mọnde, Wednesde, Fraịdee, Satọde na Sọnde, na-apụ Chicago-O'Hare na 6: 05 pm, na-abata na Lisbon na 7:50 nke ụtụtụ. Flightslaghachi ụgbọ elu na-ahapụ Lisbon na 1: 05 pm, na-abata O'Hare na 4: 05 pm.
Sgbọ elu SFO ga-arụ ọrụ na Mọnde, Tuesday, Thursday, Satọde na Sọnde, site na June 10, na-apụ SFO na 4: 10 pm, wee rute Lisbon na 11: 25am n'ụtụtụ echi. Flightslaghachi ụgbọ elu na-ahapụ Lisbon na 10am, na-abata na SFO na 2: 40 pm.
Flightsgbọ elu Washington ga-arụ ọrụ na Mọnde, Wednesde, Tọzdee, Fraịde na Sọnde, na-apụ na 10:40 nke mgbede, na-abịarute Lisbon na 10:50 nke ụtụtụ echi. Flightslaghachi ụgbọ elu na-ahapụ Lisbon na 4:30 pm, na-abata na Dulles na 7:40 pm.
"Na ihe karịrị ụgbọ elu ọhụrụ 70 n'ụzọ, nke a bụ naanị mmalite," ka David Neeleman, onye guzobere JetBlue Airways na onye nwe oke na TAP kwuru. “Anyị nwere ọnụ ụzọ ámá 10 site na Brazil ruo Portugal ma kwenyere na anyị nwere ike ịkwado otu nọmba ahụ site na US. Mgbasa taa na Chicago na Washington, DC, na-egosi ihe ebe mba Portugal na-ewu ewu na-ewu ewu, ọkachasị ndị ọbịa si US Netwọk anyị karịrị Lisbon na-etokwa. Anyị na-eje ozi ihe dị ka ebe 75 dị na Europe na Africa na pasent 50 nke ndị njem anyị si America na-efega anyị ebe na-agafeghị Portugal, ọtụtụ na-eji ihe omume ama ama Portugal Stopover eme ihe. ”
A330neo ga - egosipụta ebe ikuku ọhụrụ site na ụlọ Airbus. Ugbua ụlọ akụ na ụba gụnyere ngalaba abụọ: Economy na EconomyXtra. Nhazi na imewe ahụ na-enye ikuku dị ọhụrụ, nwekwuo ụlọ ime ụlọ, oche oche miri emi karị, oche ọhụụ dịkwa na ndo nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba ntụ, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọbara ọbara na EconomyXtra. Oche oche oche na akụ na ụba oge niile bụ sentimita iri atọ na otu, ebe Xtra na-enyekwa ụlọ mgbakwunye ụkwụ atọ ọzọ na nke 31 sentimita asatọ.
N'ime klaasị azụmaahịa TAP, TAP na-enye oche oche ọhụụ ọhụụ iri atọ na anọ nke karịrị ụkwụ isii n'ogologo oge zuru ezu. Ọzọkwa, TAP emeela oche oche azụmaahịa ọhụrụ ya ka ọ gụnye oghere USB na ntọala eletrik ọ bụla, njikọ maka ekweisi, ọkụ ọgụgụ onye ọ bụla, na ohere ndị ọzọ, gụnyere ime ụlọ nchekwa.
The A330neo ugbo elu atụmatụ ọnọdụ nke nkà ahaziri ntụrụndụ usoro na Njikọta na-enye ohere maka free ozi. TAP ga-abụ ụgbọ elu ụgbọ elu mbụ nke Europe na-enye ozi ntanetị weebụ na ụgbọ elu ogologo oge n'efu maka ndị njem niile.
Kemgbe mmalite izizi ya na 1945 nwere naanị otu ụgbọ elu, ụgbọ mmiri TAP etolitewo nwayọ:
TAP webatara usoro ihe omume Portugal na 2016 iji mee ka ndị ọbịa 'gafere Lisbon' gaa n'ihu. Ndị njem na TAP niile nke Europe na Africa nwere ike ịnụ ụtọ abalị ise na Lisbon ma ọ bụ Porto n'ụzọ, na-enweghị njem ụgbọ elu.
Obodo Portugal, nke akpọrọ "Mmemme Kachasị Mma Nzuzo" site na magazin Global Traveler, gụnyere netwọkụ karịa ndị mmekọ 150 na-enye onyinye na-enweghị atụ maka ndị ahịa Stopover maka ọnụego ụlọ oriri na nkwari na ekele dị ka nnabata n'efu na ebe ngosi nka, dolphin na-ekiri na Osimiri Sado na nri - ọbụna karama mmanya Portuguese na ụlọ oriri na ọ participatingụ participatingụ na-ekere òkè.
Ndị njem nwekwara ike ịnụ ụtọ nkwụsị na Lisbon ma ọ bụ Porto ọbụlagodi na ebe njedebe ha ikpeazụ bụ na Portugal, dị ka: Faro (Algarve); Ponta Delgada ma ọ bụ Terceira (ndị Azores); na Funchal ma ọ bụ Porto Santo (Madeira).
Brazil klas azụmahịa ụlọ ụgbọelu Chicago klas ụsọ oké osimiri Nkasi obi amalite azụmahịa ụgbọ elu azụmahịa tụnyere otito Njikọ Njikọta akwụ ụgwọ ugbu a ahịa DC data afọ iri Nyefere nnweta na-apụ design ego dolphin East ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ Economy klaasị akụ na ụba ntụrụndụ ntinye European Airgbọ elu Europe naanị mgbasa ahụmahụ mmezi ezinụlọ Ụgbọ elu ezinụlọ Faro feature atụmatụ ụkwụ ewepụghị nsoro ofufe site efe efe -esonụ nri onye nchoputa Francisco ọhụrụ Fridays full ọnụ ụzọ ámá njem zuru ụwa ọnụ green -eto eto obi akụkọ ihe mere eme onye ọ bụla otutu ịme webata ugboelu JetBlue uzo ikuku jetblue jets June dị nnọọ mgbe e mesịrị ọhụrụ ebupụta ahapụ legroom ọkụ Lisbon ọdụdọ ogologo ụgbọ elu ogologo oge ala M Madeira magazine isi ozi nhazi oge Daysbọchị Mọnde ọnwa oche ndị ọzọ ihe ngosi nka aha ya bụ dị warara NEO network ụgbọ elu ọhụrụ ọgbọ ọhụrụ ụgbọ elu ọhụrụ ọrụ ọhụrụ New York Newark ehihie na abalị North North America North America n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ àjà -enye abanyela Na-arụ ọrụ arụmọrụ mmekọ njem uto ndi njem pasent oge onye ọsụ ụzọ ebe plan ụgbọelu ụgbọelu zubere ewu ewu ebe a ma ama Porto Portugal na Portuguese ọnọdụ kwadoro adịchaghị gosipụtara nkeonwe omume nso ọgụgụ ndekọ Red mgbe nile mmeghari ohuru nọchite anya ụlọ oriri na ọṅụṅụ osimiri ụlọ Gburugburu ụzọ netwọk ụzọ okporo ụzọ San Francisco São oche oche -eje ozi SFO onye nkwekọrịta ndị nwe ọnụ ohere mpere ohere na-ekwu, nchekwa Aysbọchị Sọnde usoro mgbata TAP Ikuku Portugal ụtọ ụtọ United States Echi n'elu 10 transatlantic mgbanwe njem njem njem Daysbọchị Mọnde United States USB ojiji uru Washington ụzọ web izu -enwe kwa izu mmanya York